WordPress Image Rotator Widget ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း MarTech ဘလော့ဂ်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 14, 2011 အင်္ဂါနေ့, မေလ 3, 2016 Douglas Karr
DK New Media ဒီ WordPress plugin ကို back-burner တွင်အချိန်အတန်ကြာထားရှိခဲ့သည်။ ရိုးရှင်း။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပုံရိပ်လှည့်ပတ်ပလပ်အင်ကိုဝယ်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များသာမက WordPress အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပါမြင့်မားသည်။ ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သောပလပ်ဂင်များကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်ကိုလုပ်ရန်ကတိပျက်ခြင်းသို့မဟုတ်လုံးဝအလုပ်မလုပ်ခြင်းများဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ခဲ့တယ်။
Image Rotator Widget ကို Download လုပ်ပါ
ပထမဗားရှင်းသည်ရုပ်ဆိုးသောကြောင့် WordPress Plugin Repository သို့ဘယ်တော့မှမထည့်ပါ။ estetics သည်ပြissueနာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ စာမျက်နှာတစ်ခုသို့ချက်ချင်းလည်ပတ်နိုင်သည်။ setting များကိုပြုပြင်ရန်နေရာနှစ်နေရာရှိသည်။ ၎င်းသည်ရုပ်ဆိုးသည်ဟုငါပြောခဲ့သလား။
Rotator တွင်အသွင်ကူးပြောင်းမှုသုံးခုဖြင့် Linear, Loop နှင့် Fade တို့ပါရှိသည်။ Linear သည်ပုံများအား ၄ င်း၏ကွန်တိန်နာတစ်လျှောက်အလျားလိုက်လိမ့်မည်။ linear rotator သည်ပုံရိပ်များ၏အဆုံးသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းသည်နောက်သို့ခုန်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လမ်းကိုလိမ့်မည်။ Loop Rotator သည် circular ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးပုံရိပ်ကိုရောက်သောအခါ၊ စာရင်းထဲတွင်ပထမဆုံးပုံပေါ်လာပြီး၊ Fade သည်ရုပ်ပုံတစ်ခုစီနှင့်ရုပ်ပုံတစ်ခုစီကိုညှိုးနွမ်းသွားစေလိမ့်မည်။
ဤအသွင်ကူးပြောင်းမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကြီးမားဆုံးပြissueနာမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ settings ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါကအရုပ်ဆိုးတဲ့အပိုင်းပါ၊ Rotator သို့ပုံများထည့်ခြင်းလုပ်ငန်းသည်ရိုးရှင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ လွပ်လပ်သော“ +” ခလုတ်သည် WordPress ၏မီဒီယာပေးဆပ်မှုကိုစတင်လိမ့်မည်။ ထို မှနေ၍ အသုံးပြုသူများသည်ပုံအသစ်တစ်ခုကိုတင်ရန် (သို့) ၎င်းတို့သည်မီဒီယာစာကြည့်တိုက်မှတင်ထားသောပုံတစ်ပုံကိုပို့စ်တစ်ခုထဲသို့ထည့်နေခဲ့သည့်အတိုင်းလိုသလိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ပုံသည်တင်ပြီးသွားသည်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူမှရွေးပြီးသောအခါ“ Send to Image Rotator” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ တပ်မက်လိုချင်သောရုပ်ပုံများအားလုံး upload ပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့သည်စီမံရန်လွယ်ကူသည်။
image name တစ်ခုပေါ်တွင် mouse ကိုနှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ပုံပါသည့် tooltip ကိုပြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝစ်ဂျက်ဆက်တင်များကိုမရှုပ်ထွေးစေလိုသဖြင့်ပုံများအားလုံးကိုချိန်ညှိသည့်ကွန်တိန်နာထဲသို့ထည့်သွင်းခြင်းသည်ရွေးချယ်စရာမဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပုံများကို tooltip preview တွင်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်သည်နှစ်ဆသောအကျိုးရလဒ်များဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည် edit လုပ်ခြင်း၊ ပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းစသည်ဖြင့်ပုံများမတင်ခင်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ interface ကိုသန့်ရှင်းစွာထားရှိပြီး၎င်းသည်လွယ်ကူသော sorting နှင့် delete လုပ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
Sorting သည်ပုံရိပ်စာရင်းအတွင်းရှိနေရာလွတ်များကို နှိပ်၍ လိုချင်သောနေရာသို့ဆွဲတင်သကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။ ပုံများ (မတူညီသောအချိုးအစားများဖြင့်) ကို setting container ထဲသို့တိုက်ရိုက်ထည့်လိုက်လျှင်မည်မျှလည်ပတ်နေမည်ကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ဝစ်ဂျက်မှရုပ်ပုံတစ်ခုကိုဖျက်ရန်သင်ဖယ်ရှားလိုသည့်ပုံ၏ဘေးရှိ“ -” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်“ Save” ကိုနှိပ်ရမည်သို့မဟုတ်ဤပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမျှပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဤပလပ်အင်ကို run လျှင်၊ မှတ်ချက်များ၊ ချို့ယွင်းမှုများသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်ချက်များကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချန်ထားပါ WordPress အထောက်အကူဖိုရမ်များ(ကျနော်တို့ကဒီစောင့်ကြည့်) သို့မဟုတ်ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် တိုက်ရိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်း.
Tags: DK New Mediaimage ကိုပုံရိပ် Rotatorimage ကို Slider ကplugin ကိုrotateslider ကိုဝစ်ဂျက်WordPresswordpress plugin ကိုWordPress ဝစ်ဂျက်
ဒီဇင်ဘာ 14, 2011 မှာ 10: 41 AM
ပုံအရွယ်အစားသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။ upload box က 200 × 200 လို့ပြောတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏ပုံသည်ကွဲပြားသောအချိုးအစားဖြစ်ပါကမည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
ဒီဇင်ဘာ 15, 2011 မှာ 1: 10 AM
ဒီပလပ်အင်ကိုရှုပ်ထွေးမှုများစွာဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ သူတို့ကအလျားလိုက်ဗဟိုပြုနိုင်ခြင်း၊ pixelated ဖြစ်ခြင်းစသည်ဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဘယ်သောအခါမျှမှန်ကန်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ စာမူတစ်ခုအတွက်သင့်လျော်သောပုံရိပ်များကိုအရွယ်အစားလိုအပ်သည်နှင့်အမျှအသုံးပြုသူသည်ဤနေရာတွင်မှန်ကန်စွာအရွယ်အစားပြောင်းသင့်သည်။
14:2011 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 06 တွင်
ကွဲပြားခြားနားမှုအကျယ်အချိုးအစားအလုပ်မလုပ်ပါ, သို့သော်အမြင့်အချိုးအစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ယခုအချိန်အထိ၊ ဝစ်ဂျက်မှအကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်၊ သင်တူညီသောအမြင့်ကိုအသုံးပြုရန်သင်စီစဉ်ထားသည့်ပုံအားလုံးကိုပြုလုပ်သင့်သည်။
လာမယ့်ဖြန့်ချိမှာတော့ငါဝစ်ဂျက်မှအတိုင်းအတာ settings ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ သင်ကဝစ်ဂျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အကျယ်နဲ့အမြင့်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးပုံရိပ်တွေနဲ့အညီအရွယ်အစားပြောင်းသွားလိမ့်မယ်။
ဒီဇင်ဘာ 15, 2011 မှာ 1: 08 AM
@coleydotco - ဒီ #WordPress #Plugin အပေါ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့အလုပ် disqus ။ ငါလုံးဝသဘောကျတယ်
5:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 04
5:2012 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 09
သေးပါဘူး, ဗေသနိယ ... ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လာမယ့်ဖြန့်ချိမယ့်အင်္ဂါရပ်အဖြစ်ကထွက်လှိမ့်ဖို့စီစဉ်!
စက်တင်ဘာ 4, 2012 မှာ 10: 24 AM
@BethanyBey: link ကိုထည့်သွင်းရန် plugin ကို update လုပ်ပြီ disqus!
မေလ 21, 2013 မှာ 2: 34 pm တွင်
ငါတို့သည်လည်း link ကိုပြissuesနာများကိုအချို့တညျ့ကြောင်းယခုအပတ်ကပြုပြင်မွမ်းမံအချို့ကိုလုပ်လေ၏။ @BethanyBey: disqus
ဇန်နဝါရီ 19, 2012 မှာ 5: 04 AM
ဤအရာကိုချစ်ပါ - ၎င်းသည်အချိတ်အဆက်ရှိသည့်အခါတွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ကောင်းသောအလုပ်ယောက်ျားတွေ - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
13:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 4, 41
ဒီ plugin ကိုကျွန်တော်တကယ်သုံးချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံကို upload လုပ်တဲ့အခါ 'rotator widget to ပုံရိပ်ကို send' ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိပါဘူး၊ သာမာန် 'insert to post' သာရှိပါတယ်။
ငါစခရင်ရိုက်ထည့်ပြီးပါပြီ၊ ၎င်းသည်ဒတ်ခ်ျဘာသာစကားဖြင့်ဖြစ်သော်လည်း 'send image ... ' ခလုတ်ပျောက်နေသည်ကိုသင်မြင်တွေ့နိုင်သင့်သည်။ ငါသည်သင်တို့၏အကူအညီကိုအလွန်တန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
13:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 29
ဘာသာပြန်ဖိုင်တည်ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ဒတ်ခ်ျဘာသာဖြင့်“ rotator widget သို့ပုံပို့သည်” ကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြနိုင်မလား။ ကျနော်တို့မကြာခင်ဖြန့်ချိဖို့စီစဉ်နေပါတယ်မဟုတ်ပေမယ့်ဒီထဲမှာချော်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
13:2012 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 10, 47
သင်၏လျင်မြန်သောပြန်ကြားချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မှန်ကန်သောဘာသာပြန်ချက်သည် 'ပုံရိပ်လည်ပတ်သောဝစ်ဂျက်တွင်' invoegen 'ဖြစ်သည်။
ငါတကယ်အလုပ်လုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ပြsendနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင် 'send image to rotator widget' ကိုအင်္ဂလိပ်လိုသုံးရင်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။
13:2012 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 2, 40 တွင်
ငါမှာ WP sites တော်တော်များများ run နေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါဒီပုံလှည့်စက်ကိုအင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ခင်ဗျားထင်တယ်၊ ဘာသာပြန်ချက်နဲ့ဆက်စပ်နေတယ်။ သင်မကြာမီအနာဂတ်တစ်နေရာရာမှာဘာသာပြန်ကိုတည်ဆောက်ရန်လှည့်ပတ်နိုင်လျှင်ကောင်းပါလိမ့်မည်။ အင်္ဂလိပ်လိုမှဒတ်ခ်ျသို့ပိုမိုဘာသာပြန်ရန်သင်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်ကူညီရန် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။
နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခု - ဓာတ်ပုံကိုဆက်ပြီးတည်ရှိနေစေဖို့ရွေးဖို့နည်းလမ်းရှိသလား၊ ဒါ့ကြောင့်လူတွေငါထည့်လိုက်တဲ့စာသားကိုဖတ်နိုင်ပြီလား။ သို့မဟုတ်ကွင်းဆက်ထဲမှာ, ကဒီထက်မြန်မြန်စေ?
ဧပြီ 22, 2012 မှာ 12: 47 pm တွင်
ဧပြီ 25, 2012 မှာ 9: 18 AM
ဤဝစ်ဂျက်သည်ရိုးရှင်းပြီးပုံများနှင့်လင့်များထည့်ရန်ရွေးချယ်မှုသည်အလွန်ကောင်းလိမ့်မည်။ ငါမှတ်ချက်အဟောင်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးဒီအင်္ဂါရပ်ကိုလွန်ခဲ့သော ၃ လကသုံးစွဲသူများမှတောင်းဆိုခဲ့တာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ မကြာမီသင်ပေါင်းစည်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဧပြီ 25, 2012 မှာ 9: 34 pm တွင်
30:2013 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 26 တွင်
ဧပြီ 29, 2012 မှာ 9: 50 pm တွင်
မေလ 7, 2012 မှာ 12: 55 pm တွင်
အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့်ရုပ်ပုံဘေးတွင်> ဇာတ်ကောင်ရှိသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကြီးကျယ်တယ်။
စက်တင်ဘာ 4, 2012 မှာ 10: 23 AM
ဒါက @ google-71556138c8611ea275e4be4f3e34b930: disqus!
ဟေးအားလုံး! link link ကိုထည့်ရန် plugin ကိုပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။
23:2012 pm တွင်အောက်တိုဘာ 3, 29
ငါပလပ်ဂင်ကိုနှစ်သက်ပြီးငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းပါတယ် ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းတစ်ခုက link အသစ်တစ်ခုကို window အသစ်တစ်ခုတွင်ဖွင့်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။
23:2012 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 20
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ မီဒီယာတင်ပို့သည့်စာမျက်နှာ၌ထိုအင်္ဂါရပ်မတူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တည်ဆောက်ထားသော WordPress တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုသာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းကိုပလပ်ဂင်တွင်ရွေးစရာတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်နိုင်သည်။ ယခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတွေ့အကြုံရှိပါကယခုနှင့်ဤအချိန်အကြားတွင် jQuery ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
23:2012 pm တွင်အောက်တိုဘာ 6, 38
ငါအခြား plugins ကိုအတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သောအရာကိုကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်မကံကောင်းပါစေ။ အပြောင်းအလဲကိုဘယ်မှာလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါ့ကိုပြောပြနိုင်မယ့်အခွင့်အရေး၊
မေလ 21, 2013 မှာ 2: 33 pm တွင်
@janetmorrow: plugin ကို disqus တွင် window အသစ်တစ်ခုတွင် link များဖွင့်ရန်စွမ်းရည်အသစ်ဖြင့် update လုပ်သည်။ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုရယူပါ။
24:2013 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 9, 47 တွင်
အလွန်ကောင်းတဲ့ plugin အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မေးခွန်းတစ်ခု - ပလပ်ဂင်၏သာဓကနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်ရှိပါသလား။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုတစ်နေရာနှင့်အခြားပုံတစ်ပုံတွင်သုံးလိုသည်။
30:2013 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 25 တွင်
ဘာလို့မတွေ့ရတာလဲ - သင်စမ်းကြည့်ပြီးပြီလား
30:2013 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 1, 10 တွင်